10 Goobaha Best Si Booqo In South Italy | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Goobaha Best Si Booqo In South Italy
The cimilada diiran ma dhamaan wali. Weli waxaa jira waqti iyo sabab fiican bishan in ay booqdaan South Italy! Koonfurta Talyaaniga waxay leedahay xoogaa bixinno la yaab leh. The Goobaha Best in ay soo booqdaan ee South Italy waxaa ka mid ah; jiida quruxda badan ee xeebta riwaayado, sawirtaa xeebaha kaamil ah, jasiirado xeebeed qurux badan, iyo fara badan oo magaalooyin iyo magaalooyin taariikhi ah. Waxa ay ahayd adag tahay in hoos ay u koobto keliya our liiska 10, laakiin waa kuwan 10 meelaha ugu fiican in ay soo booqdaan ee South Italy.
1. Amalfi Coast The
Waa maxay safarka Italy oo aan booqasho ku Amalfi Coast? Gobolka Tani waxay gaar ah oo Southern Italy waa mid ka mid ah kuwa ugu qurux badan oo dunida caan! Iskala ka Naples si Salerno, dalabyada xeebaha Amalfi muuqaal riwaayado, magaalooyinka qurux badan in aaddey buuraha, iyo qaar ka mid ah goobaha taariikhiga xiiso leh.
Gobolka Tani waxay la ilaaliyo qoreysa qaar ka mid ah magaalooyinka xeebaha idyllic sida Amalfi, Erchie, Yaryar, iyo Positano - magaalooyinkani waxay leeyihiin guryo midabyo kala duwan leh oo is dulsaaran hillsides oo aad siisaa fursado sawir ah oo sawir ku habboon.
Intaas waxaa sii dheer, goobaha sida Villa Rufolo in Ravello bixiyaan views mushkilado dhanka Badda Mediterranean-ka.
Sorrento ayaa labadaba lagu raaxaysto in dalxiisayaasha heli raaxo iyo sidoo kale Antiquities gaar ah iyo-dhamaadka sare for sale ee magaalada jir. doon A ka tago halkan ka gasiiradda ee Capri, waana boodada weyn off for dhibic lana kulmay. Si kastaba ha ahaatee, Sorrento sidoo kale waxaa loo yaqaanaa iyada cunnada Gormeega fiican, Guryo gabiga cajiib ah (in kastoo xeebaha lahayn), iyo views qeybalay ee Mount Vesuvius.
Bologna si ay Tareenadu Pompei
Lana si Tareenadu Nocera Hoose
Tareenadu si Salerno Nocera Inferiore
Tareenadu si Salerno Mercato San Severino
Magaalada Tani Dr Makumbe waa taagan xeebaha dhagax ah ee badda Mediterranean ka,. Its dekedda ritzy waa mid ka mid ah goobaha ugu sareeya Italy. Haddii aad rabto in aad halkaan sii joogo inta lagu jiro xagaaga laga yaabaa in aad si fiican u qabsan ka hor si uu u helo hotel aad dooratay sida qolalka ballansan ilaa DHAQSIYAHA. Sida aynu ayaa ku dhow dhamaadka xilli diiran, yaabaa inaad yeelatid xoogaa nasiib leh jaale daqiiqadii ugu danbeysay-!
Salerno in Tareenadu Maratea
Bari si ay Tareenadu Maratea
Naples si Tareenadu Maratea
Tareenadu Power in Maratea
taariikhda qabow Qaar ka mid ah, Paestum waa magaalo on ciidda Talyaaniga, laakiin waxa la aasaasay by ahaa Gariig fara qadiimiga ah markii ay ku jireen gacanta qayb ka this ee Italy! Markaas waxaa loo yaqaan Poseidonia ilaaha badda.
naqshadaha Giriigga ah oo keliya waa booqo si loo hubiyo in ay ku riday in gelin aad faahfaahin marka lagu daro booqasho saddex macbudyo Greek iyo sidoo kale sii raagayaan in aad leedahay si aad u aragto. ugu da'da weyn ayaa la dhisay oo ku saabsan 550BC (siin ama sannad ah) oo waxaa guriga Hera taas oo la yaab leh.
Salerno in Tareenadu Paestum
Naples si Tareenadu Paestum
Pompei in Tareenadu Paestum
Awoodda Tareenadu Paestum
5. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Naples
Naples, ama Napoli, ku xiran tahay waxa afka, waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Italy. Si aad u noqoto qof daacad ah, waxaa jira qaar ka mid ah views aad u soo horjeeda on qayb ka this of South Italy. Ku qaar, waa weyn tahay, wasakhaysan, dembi-fuulay, oo kala daadanaya, dadka kale waa qalqal iyo Hawada. Wax kasta oo dhabasho timahaaga dib, waxaan u maleynayaa in? Hal shay waa hubaal in kastoo. Tani magaalada Southern xeebaha leeyahay shakhsiyad u gaar ah!
Dad badan oo cuntada uu jecel yahay Talyaaniga asalkiisu ka soo jeedo ee Naples oo ay ku hareeraysan meelaha sida pizza, iyo baastada. suxuunta la qaado si dhab ah halkan oo sida caadiga ah kasoo muuqan cusub, maaddooyinka beeray. soo jiidashada dalxiiska ee Naples ka mid weyn a qalcaddii Dr Makumbe, New Castle, iyo sidoo kale qalcaddayda badda ee Castel del Ovo ah. Magaalada sidoo kale waxay ku xigtaa Vesuvius, volcano kaliya firfircoon qaaradda Yurub.
6. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Alberobello
Magaalada Alberobello waa mid gaar ah in ay tahay tusaale ugu wanaagsan ee la ilaashaa oo naqshadda dhismaha Trulli in laga helo oo dhan ee Italy (si fiican u, sidaas la ii sheegay in).
Guryaha la dhisay ka style Trulli waxaa lagu sameeyey Saanqaag Fidlo ah dhagax toobinta oo aan la isticmaalayo hoobiye (in kastoo, Anigu waxaan ahay dhise ma sidaas ha igu soo qaadan on in). The guryaha ugu da'da weyn taariikhda qarnigii 14aad iyo gebi ahaanba cajiib ah, ka dhigaysa mid ka mid ah waa in la arko iyo magaalooyinka qurux badan Koonfurta Italy inay soo booqdaan.
Naples si Tareenadu Monopoli
Taranto in Tareenadu Fasano
7. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Tropea
eeg, Aan idiinku Digi ka hor. fursado photo ee meeshan waa waalan yahay. Ka taxadir in aadan ka maqnaan doona on wax dhabta ah! The magaalo qadiim ah oo qurux badan of Tropea waxaa saaran dusha sare buuro dhaadheer iyo wadada geeskeeda a xeebta bacaadka cidhiidhi ah, waxa la sheegay in la aasaasay by Hercules qudhiisa.
Haddii aad tahay meelaha la, waxaa jira laba kiniisadaha qurux badan in Tropea aad, del Santa Maria ee Isola waa kaniisad Dr Makumbe oo loo dhisay jasiiradda ah inkastoo sano ku qoofalan oo keentay in buundada dal la xirrira dhexeeya jasiiradda iyo waynaha. kale waa katedraalka; waxa ay leedahay laba bambo aan qarxin shukaansi ka WW2 fadhiya kaliya ka baxsan albaabka kaniisadda. Dadka deegaanka rumeysan yahay dhismaha la ilaaliyo by weli sokoeye iyo si aad u daawato aad tallaabo!
kiniisadaha oo keliya this mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee koonfurta Italy ka dhigi. Waxaad ku jeclaan doonaa!
Vibo Marina in Tareenadu Tropea
Catanzaro in Tareenadu Tropea
Cosenza in Tareenadu Tropea
Lamezia Terme in Tareenadu Tropea
8. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Capri
Farsamo jasiirad yar oo, Capri ayaa ah magaalo qurux badan oo markab in aad leedahay si ay u sahamiyaan. gasiiraddii oo dhan waa hodan ku ah taariikhda iyo caddooyinka iyo mid rigoore loo jecel yahay oo aad u leeyihiin in ay soo booqdaan markii gobolka.
Haddii aad raadinayso wax si aad u aragto, guriga ee Roman Emperor Tiberius (Villa Jovis) weli waa mid ka mid ah baraha ugu waaweyn si ay u arkaan jasiirada oo sidaas waa Grotto Blue. godkii biyaha hortooda waa kaliya la heli karo by doon iyo kaliya marka ay jiraan baddu wanaagsan (si loo diyaar garoobo kansal).
9. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Lana iyo Herculaneum
lana kulmay iyo Herculaneum ahaayeen laba magaalo iyo tuulooyinkoodii Roman in la ciribtiro markii Mount Vesuvius dib u qarxay jidka oo dhan in 79 AD.
Malaha ugu caansan laba yahay magaalada lana kulmay, oo aad hadda ku wareegsan warwareegi karin oo sahamiyaan marka aad ku sugan tahay goobta. xun An 3,000 oo qof ayaa dhintay magaalada, laakiin ash kulul derdertay arkaynin Guryohoodii mooyee galay waxa uu yahay maanta. Ha loo digay, waxaa ka heli kartaa quruxsan mashquul halkaan, si waafaqsan qorsheeyo oo la xasuusto laga yaabaa in aad saf u tigidh si ay u soo galaan.
Oh, sidoo kale magaalada ugu dhow ee Herculaneum yar oo ahayd degmada hantiilayaal iyo siinayaa tusaale sida Romans hodanka mar noolaa. Hubi inaad soo booqato Herculaneum Ciidanka Booliisku Area haddii aad buff taariikh!
Torre Del Greek oo tababartay si lana kulmay
Bari si ay Tareenadu Pompei
10. Goobaha Best Si Booqo In South Italy: Aeolian Islands
Last on liiska Meelaha ugu our in ay booqdaan in South Italy. Aeolian Islands The! Waxay waxaa loo yaqaan Hawaii ee Italy. Waa xarig ah jasiiradaha waqooyi ka Sicily, waana doqon qurux badan. Sida la yaab leh waxa laga yaabaa inay, Qofna waa ogyahay waxa ku saabsan. Laakiin kuwa ku dhawrtaan ugu soo laabtay. Maxaa yeelay, iyagu waxay ogaan waxay yeelan doonaan meesha oo dhan naftooda.
Ijaarashada mootooyinka in zip xeebaha madow agagaarka qurux badan. Marxaladaha aperitivo in Pollara. Doon agagaarka gasiiraduhuna waxay ku wareegsanaa Stromboli, Panarea, iyo Lipari. Helitaanka uumi bixiya la halkay biyo baaruud in Vulcano. The vibes Greek (ma la yaab leh - jasiiradaha ayaa magacaabay Aeolus, ilaaha reer Dabaysha, by degayaasha Greek). Salt wiiqay guryaha daadinta hoos xeebta. Iyo dareen ah sida aad ee waa on qarsoodi weyn oo ah in aad kaliya doonayaa inaan la wadaagga kuwa aad jeceshahay!
tip Insider: safri halkan u dhexeeya Easter-October iyo Kitaabka ka hor, haddii aad rabto in aad soo booqato in August!
Diyaar u ah inaad xirxirto boorsooyinkaaga safarka Koonfurta Talyaaniga? Markaas jartaan tikidhka tareenka aad la Save A tareenka daqiiqo gudahood. No lacag dheeri ah, buunbuuninayo ma, kaliya madadaalo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Goobaha Best Si Booqo In South Italy” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#italyholiday #KoonfurtaItaly #SummerinItaly #TareenTravelItaly hawlgalin safarka tareenka